FAMONOANA KANDIDA DEPIOTE TAO TSARATANANA : Nidoboka am-ponja ireo voarohirohy
Olona fito no natolotra ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Mahajanga ary dia naiditra am-ponja avokoa ny herinandro lasa teo. 1er avril 2019
Mbola mitohy ny famotorana ankehitriny satria nametraka fitoriana ny havan’ny maty. Tsiahivina moa fa ny 10 marsa teo no nisy naka an-keriny i Bozon izay anisan’ireo kandida solombavambahoaka ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna.
Nisy ny fanarahan-dia ary intelo miantaona no nifanehitra tamin’ny mpaka an-keriny ireo mpitandro filaminana saingy tsy votsotra mihitsy i Bozon ary dia ny vatana mangatsiakany moa sisa hitan’ny fokonolona. Misy kandida solombavambahoaka hafa voarohirohy amin’ity raharaha ity. Misy mpampianatra ihany koa voarohirohy, ary misy lehiben’ny dahalo iray maty.
Mbola karohina anefa ny lehiben’ireo mpaka an-keriny hatramin’izao, izay tsy mety tratra mihitsy. Manaraka ity raharaha ity akaiky ireo mpanara-maso ny fiainam-pirenena. Toy izay koa ny vahoakan’i Tsaratanàna satria efa zary fanaon’ireo olon-dratsy ny mangalatra olona sy mitaky vola. Manjaka tanteraka ny fakana olona an-keriny any amin’ity distrika ity ary tato anatin’ny roa taona dia efa mahatratra an-jatony ireo efa nalaina an-keriny. Misy ny tafaverina soa aman-tsara any amin’ny fianakaviany.
Misy kosa ireo nafoin’ny fianakaviana toy ity kandida solombavambahoaka izay efa nitazona andraikitra maro teo amin’ny firenena ity ka anisan’izany ny sampan-draharaham-paritry ny fampianarana ao Betsiboka sy ny tale kabinetran’ny kolontsaina. Ahiana ho misy ambadika politika ihany koa ity raharaha ity ka malina ireo mpanao fanadihadiana. Ho hita eo ihany ny tohiny.